Biko gwa m ihe m si ara ara! | Martech Zone
Biko gwa m ihe m si ara ara!
Thursday, June 21, 2007 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Ahụrụ m ihe mgbaru ọsọ n'anya. Mmama mme utịtmbuba ke ini nnịmde mmọ ke idemmi. Ná ngwụsị afọ gara aga m setịpụrụ onwe m ihe mgbaru ọsọ na m ga-agbaji akara 5,000 na Technorati na 2007. Nke a bụ na mgbakwunye na ụfọdụ ihe mgbaru ọsọ ndị ọzọ m setịpụrụ. Ewezuga ahụ ike m (ọ dị m mkpa ịkwụsị ibu), akwaturu m ebum n’obi ọ bụla m setịpụrụ onwe m, na mgbakwunye na ọkwa Technorati m.
Izu ole na ole gara aga, blọọgụ m yiri ka 'ọ rapaara' na uto, agbanyeghị. M ga-edekarị nke a ka ndị na-apụ apụ maka oge ọkọchị. Mgbe ọ bụ 'ọkwa' gị nke na - anaghị agagharị, agbanyeghị, nke ahụ na - atụ aka na okwu ọzọ ebe ọ bụ na anyị niile ga - anagide oge ọkọchị. Izu ole na ole gara aga, enwere m obi ụtọ ịhụ na blọọgụ m na-agbatị gburugburu 2,010… ugbu a, ọ laghachitela ruo 2,125.
Ndi ọdịnaya m na-ebelata?
M ga-akwụsị isi okwu?
Ana m a plainụ ara?
Emechara m n'ezie ịzụta ụfọdụ Adwords maka saịtị ahụ. Ana m etinye uche na ịde blọgụ ụlọ ọrụ na mgbasa ozi mmekọrịta, yana ịzụrụ ala Adwords maka Indianapolis. Enwetala m ihe gbasara 15,000 na mgbasa ozi mana ọ bụ naanị pịa ole na ole. Achọghị m ịma nke ahụ, karịa, ebe ọ bụ na pịa na-efu ego. Ebumnuche nke mgbasa ozi bụ aha njirimara n'ezie, ọ bụghị okporo ụzọ nkịtị. Echere m ma m nwere ike nweta aha m n'ebe ahụ na ndị na-ege ntị kwesịrị ekwesị, okporo ụzọ ga-agbaso. Mee ka m mara ma ọ bụrụ na ị hụ otu n’ime mgbasa ozi ndị a ma gwa m ihe ị chere banyere ya.
M ga-enwekwa mmasị ịnụ ihe ị na-atụ uche banyere blog m nke dị ịrịba ama tupu mgbe ahụ mana ọ bụghị n'oge gara aga. Ọ bụrụ na ihere na-achọghị ịza ajụjụ n’ihu ọha, nweere onwe gị iji ya peeji kọntaktị m. 'Aha m na uba' m yiri ka ọ na-abịa site na WordPress Plugins, ọ bụghị ọdịnaya ndị ọzọ na saịtị ahụ. Nke ahụ bụ obere ihe na-agbaghasị ebe ọ bụ na m na-eme nnyocha ntakịrị na isiokwu m kwa ụbọchị.
N'ezie, ọ bụrụ n'ịchọrọ inyere aka na ọdịnaya m NA ọkwa m na teknụzụ, dee banyere blọọgụ m yana otu o si eme nzuzu na blọọgụ gị. M na-ekwe nkwa na m na-emeghe ka akatọ na-atụ anya na mmejuputa ụfọdụ mgbanwe ozugbo enwere ike.
Were iPhone ahụ!
Formulas Ahịa Email na Igosiputa Igodo
Jun 21, 2007 na 10: 41 PM
Yabụ, Doug, oge ị ga-anọ n’elu 5 nke teknụzụ, kedu ihe na-esote, ọchịchị ụwa? 🙂
Ma lee, echere m na 10,000 ga-abụ ezigbo ihe mgbaru ọsọ a
Jun 22, 2007 na 6:41 AM
Top 5 ga-eme ụbọchị m! Top 10,000 bụ n'ezie ihe ị ga-eji na-anya isi. Anaghị m elebara ọnụ ọgụgụ ahụ anya n'ezie - naanị na ọ na-emeziwanye. N'oge na-adịbeghị anya ọ na-alaghachi azụ n'ihi ya enwere m nchegbu.
Anyị abụọ ga na-akwagide! O doro anya na ị ga-akarị m nso n'oge na-adịghị anya!
Jun 21, 2007 na 10: 21 PM
O nwere ike ịbụ na ị kụrụ ihe mgbochi ọnwa isii.
Technorati na-agụta njikọ na ọnwa isii gara aga, yabụ nke ahụ pụtara ka ọkwa gị wee na-abawanye na ị ga-akarịrị ọnụego njikọ ọ bụla ị na-enweta ọnwa isii gara aga.
Achọpụtara m na ihe jiri nwayọ nwayọ n'etiti 1900-2100… mgbe ahụ 1450-1900 gara ngwa ngwa.
Mgbe ahụ m dara ọrịa nke ya niile 🙂
Jun 22, 2007 na 6:46 AM
Echere m na ị bụ eziokwu Eng! Aga m edebe ya na-aga. Nchịkọta akụkọ m niile (gụnyere hits) dị ntakịrị. Agụọla m na saịtị dị ka Problogger na nanị itinyekwu posts nwere ike ime ihe dị iche.
Achọrọ m ịde post naanị maka post, ọ bụ ezie. Amaara m na ọ naghị adụ ọdụ na nke ahụ, mana nke ahụ bụ ihe ọ nwere ike ịbụ. Achọrọ m iche na m na-agbakwunye uru ndị folks na-enweghị ike ịchọta ebe ọzọ. M na mgbe na search nke pụrụ iche… ihe siri ike ịchọta!
Jun 25, 2007 na 4: 58 PM
Dị ka ụda i nwetara n’oge ezumike blues!
Ekwenyere m na njide ọnwa nke Technorati nwere ike ịbụ onye kpatara ya.
Jun 22, 2007 na 2:30 AM
Echere m na ị na-enye ezigbo ngwakọta nke posts na ị meela nke ọma ị gafere karịa ebumnuche ị setịpụrụ. M ga-anọgide na-agbanye.
Ọtụtụ blọọgụ kụrụ patches ebe enweghị nnukwu ọrụ. Amaara m nke ahụ na blọọgụ m. Nọmba ndị ụtụ m debara okpukpu abụọ karịa ọnwa isii gara aga, mana okporo ụzọ na nso nso a ka na-adịgide adịgide, na ọkwa Technorati m na-arapara gburugburu akara 6K. Mana ọ naghị ebelata ịnụ ọkụ n'obi m maka ịde blọgụ.
Ọ na-atọ m ụtọ ibipụta na ide edemede na m ga-aga n'ihu. Ana m agbalị ịghara ilekwasị anya na stats m ụbọchị ndị a mana ọ dị mma ịtọọ iche dịka ị mere.
Ahụla m ụfọdụ ndị na-ede blọgụ nwere ihe ịga nke ọma na-enweghị atụ n'ime ọnwa ole na ole ịmalite blọgụ na nke ahụ dị mma ịhụ, mana maka ọtụtụ n'ime anyị, ọ na-ewe nnukwu mgbalị ọtụtụ afọ iji hụ ezigbo nloghachi ọ bụla.
Ndụmọdụ m ga-abụ na-ede blog. Ọ bụrụ na ọ na-atọ gị ụtọ ime nke ahụ, akwụsịkwala.
Jun 22, 2007 na 6:43 AM
M hụrụ n'anya ịde blọgụ, ọkọ! Enweghị ohere na m ga-akwụsị n'oge ọ bụla. Naanị m chọrọ ijide n'aka na m ka na-akọrọ gị ụfọdụ ozi bara uru!
Anyị ga-anọgide na-apụ apụ!
Jun 22, 2007 na 7:09 AM
Don't naghị inu ara! Achọpụtala m na okporo ụzọ, njikọ na-abata, na ndị debanyere aha ọhụrụ na-aga na ebili mmiri. Na-ewepụta ọdịnaya bara uru nke ga-anọgide na-elebara anya. M nzọ ke urua atọ ị ga-eche ihe mere i dere a post!
Jun 22, 2007 na 8:18 AM
Daalụ, Pat! Echere m na enwere m obi erughị ala. Ndi be anyi na-aghozi nnukwu nkwado!
Ọzọkwa, achọpụtara m na m ruru # 41 na Todd na Ike 150 Blog Blog. Chaị! M wụliri elu ebe ahụ ntakịrị!
Jun 22, 2007 na 2: 13 PM
Iti mkpu m nwere ike ịbụ ntakịrị akaghi aka! Enyochare m na API na-eweghachi uru dị iche maka ọkwa m karịa ka ebe nrụọrụ weebụ dị! O yiri ka m mebiri 2,000! M hapụrụ ezi ndị na Technorati iji mee ka ha mara na ihe adịghị mma.
Jun 22, 2007 na 6: 21 PM
Ndewo Doug, ee ee m ka dị ndụ. Anaghị m etinye ọnụ ọgụgụ dị ukwuu na stats na-enweghị isi dị ka Technorati nwere mmasị ije ozi. A na-ejizi stats ha arụ ọrụ nke ọma ma ọ pụtaghị nnukwu ụwa. M ga-etinye uche na ezigbo gị stats na ihe ọ bụla counter na ị na-eji. Naanị debe ọdịnaya dị mma mgbe niile na ROI ga-abata.
Naanị otu nchọpụta. Aghọtara m na ị na-achọ ụlọ ọrụ azụmahịa, mana ị nwere ike ịtụle ime ka onyinyo gị dị ntakịrị. Will ga-achọpụta na Seth Godin, Steve Rubels (na Bloke Blokes 🙂 na-aga n'ụzọ ha iji weta onyogho na-esighị ike. ọ bụ oku ikpe na ihe ị nwere ike ịtụle ịnwale.
Dị ka Itch kwuru, ụfọdụ na-eme ya ngwa ngwa. Mana ha bụkarịrị ndị nwere ohere nke jisiri ike rụọ ọrụ na sistemụ ahụ, ma ọ bụ ndị netwọkụ jikọtara ha ọnụ nke nyeere ha aka n'ụzọ. Mana maka ndị ọzọ n’ime anyị n’eme ya n’ezi-okwu na-ewe nnukwu oge na mgbalị.
Nọgidenụ na-na bro.
Jun 25, 2007 na 5: 33 PM
Daalụ, Bloke! Nke ahụ bụ ndụmọdụ magburu onwe ya! Enwere m ezigbo nhọrọ ole na ole, mana m ga-ele anya ịnweta obere eserese!
Obi dị gị ụtọ na ị na-eme nke ọma!
Jun 26, 2007 na 5: 58 PM
Ma buru n'uche na oge niile a na-agbakwunye blọọgụ ọhụrụ na ndepụta ahụ. Agbanyeghi na ogo gị niile nwere ike iju ntakịrị, na ọnụ ọgụgụ ị ka bụ onye kacha elu x%
Ma mgbe ahụ, ị ​​ga-eburu n'uche onye ndị ị na-ege ntị bụ. Blog nke na emeputa ihe omuma karie nke oma gha enwe ezigbo ohere inweta otutu ndi mmadu. Yabụ, ọ na-agụta ebe ọkwa gị ga-eji tụnyere blọọgụ na saịtị ndị ọzọ gbasara ahịa na teknụzụ.
Dịka ebe nchekwa ikpeazụ, ị nwere ike iji ya mgbe niile isi okwu nwere ederede ka nwanyi ahu;)
Nọgide na-arụ ọrụ ọma ma debe ọnụ ọchị.